Ikhaya / Umklamo wangaphakathi / Lena Incazelo Ephelele Ngetshe Le-Ultra-Thin!
2020 / 11 / 10 UkwahlukanisaUmklamo wangaphakathi 3692 0
Idwala liyisikwele futhi liwugqinsi, futhi lingaqhutshwa iminyaka eyinkulungwane.
Itshe elinomqondo walo oyingqayizivele wobudala nokuthungwa okujiyile
bekulokhu kuyingxenye ebalulekile yezinto zokuhlobisa.
Kuyini I-Ultra-Thin Stone?
Sawubona, baklami! I-Granite, imabula, i-gravel encane, itshe elinomugqa, itshe eliyinyumba ngikholelwa ukuthi awumazi, kodwa kukhona itshe: mncane njengephepha, eligobekayo, eliguquguqukayo, eliguqukayo, kuphazamisa ngokuphelele umbono wakho ngetshe, kuba - itshe elincane kakhulu.
▲I-facade Yesitolo se-Apple E-Macao, eKin Sha Branch, ene-Ultra-Thin Stone
▲ Ngaphakathi Kwesitolo se-Apple Esigatsheni SeMacau sikaKin Sands, I-Ultra Slim Stone
▲ I-Ultra-Thin Stone Yezicelo Zangaphakathi
Itshe Lemvelo Noma Itshe Lokufakelwa?
Itshe elincane kakhulu liyasetshenziswa yetshe lemvelo eligqinsiwe njenge-slate ne-sandstone, ekhishwa kusetshenziswa i-nano-technology yanamuhla. I-crystallization yemvelo nobuchwepheshe besimanje, futhi ukuthungwa kwayo kwemvelo akunakuqhathaniswa nokwetshe lokulingisa.
▲Imininingwane Yesibhakabhaka Esincane Esincane
Yini Ukwahlukaniswa Kwetshe Le-Ultra-Thin
Ngaphezu kwe-shale ne-sandstone, okungamatshe aboshelwe ngokwemvelo, i-nanotechnology yangaleso sikhathi ivumela ukukhishwa kwamatshe emabula. Ngokuya ngetshe, lingahlukaniswa libe yitshe elincane elincane kakhulu, itshe le-sandstone elincane kakhulu, nemabula le-ultra-thin. Itshe le-sandstone elincanyana kakhulu linomuzwa oqinile wokuthungwa okuyimbudumbudu, kepha kulula ukumunca ukungcola; I-slate ultra-thin stone color ihlanzekile kakhulu, uma iqhathaniswa nobunzima be-sandstone iphakeme; imabula ultra-mncane itshe ebusweni ukuthungwa kuyinto entekenteke, iphethini ocebile kakhulu.
▲Uchungechunge lweSandstone Ultra-Thin Stone, Isithombe Somkhiqizo Esivela eNebelstone
▲Uchungechunge lweMarble Ultra-Thin Stone, isithombe somkhiqizo esivela eNebelstone
▲I-Slate Iyitshe Elincane Kakhulu, Isithombe Somkhiqizo Esivela eNebelstone
Kungani I-Ultra-Thin Stone Ingaboshwa?
Ngemuva kokuthi itshe lemvelo lihlukaniswe kusetshenziswa i-nano-technology, okokusebenza uqobo kunendawo ethile yokugoba ngosayizi ophansi. Kungokokuqala ukuthi okokusebenza kuhlukaniswe kokuqukethwe, futhi kusetshenziswa i-fiber yengilazi ethambile ne-glass fiber polyester yokuhlanganisa.
▲Izinto Ezintsha Zenziwe Nge-Glass Fiber Ne-Glass Polyester.
Itshe eligobekayo, elincane kakhulu alikhululekile nje kuphela ukuhlobisa isakhiwo esigobile sangaphakathi. Okuningi kungaphula uhlelo lokumodela lwangempela lwetshe, kuveze umphumela ohlukile. ESichuan Rongshou County, eRongchuang - izinsuku eziyisishiyagalolunye iphrojekthi yedolobha, isisindo setshe nokukhanya kwelanga umugqa wezindlela ezigobile, abaklami basebenzisa itshe elincanyana kakhulu ukwakha umhosha wokukhanya.
▲ ISunacon-Jiutianyicheng, i-Ultra-Thin Stone, (I-Landscape Design: Weftu) Isithombe: Beaver Landscape Photography
Ilineni likakotini futhi kungenye yezinto ezijwayelekile zokubopha nokulungisa itshe elincane kakhulu, uchungechunge olwalukiwe lwetshe elincane kakhulu luthambile futhi lungagotshwa futhi lugoqwe lube sezingeni eliphakeme, ngakho-ke lusetshenziselwa ifenisha, ukukhanyisa, imikhiqizo yedijithali nokunye ukuqeda , ukuze imikhiqizo emincane yezimboni enencazelo ehlukile yobuhle.
▲Ukwaluka Itshe Elincane Elincane, Isithombe Nge-Nebelstone
▲I-Thin Stone Case Case
▲Phezulu Kwethebula Le-Ultra-Thin Stone
Kungani i-Ultra-Thin Stone Ithumela Ukukhanya?
Imicu yengilazi, i-polyester, nezinye izinto zokulungisa ingcina zithathelwa indawo yizo izinhlaka ezikhanyisa ukukhanya, bese kuthi itshe elincane kakhulu lisetshenziswe engilazini noma i-plexiglass enomoya omnene ukukhulisa amandla alo. Ngemuva kokushaya ukukhanya, itshe lizoba nesici sokudluliswa kokukhanya, futhi ukuthungwa nombala wetshe kuzoba sobala ngokwengeziwe ngaphansi kokukhanya nethunzi, futhi umphumela wokubuka uzoba muhle kakhulu.
▲Itshe Lidlulisela Ukukhanya, Isithombe Sivela Nebelstone.
▲Isithombe esivela eNebelstone
Lizacile Kangakanani Itshe Elincane Kakhulu?
Itshe elincanyana kakhulu liqukethe itshe lemvelo elihlanjululwe futhi lahlanganiswa nge-backsheet yokuzinza. Ubuchwepheshe obukhona be-nano-layering bungahlukanisa itshe libe Izendlalelo ze-0.5mm, nangokuxhaswa okuhlanganisiwe kwezinto ezahlukahlukene, itshe elincane kakhulu lingaba mncane njengoba 1-2mm, futhi isisindo ngemitha skwele cishe I-1.5kg.
Ngabe Itshe Le-Ultra-Thin Lingakhiqizwa EChina?
Ubuchwepheshe bokwenza itshe elincane kakhulu buvela eJalimane, okwamanje itshe elincanyana le-ultra elincanyana kakhulu liyi-ejenti noma umlingani wemikhiqizo yakwamanye amazwe, abakhiqizi basekhaya abangaveza ngokuzimela itshe elincane kakhulu kuncane kakhulu, ngakho-ke itshe elincane kakhulu inenani eliphakeme elengeziwe.
Yini Inqubo Yokwakhiwa Kwetshe Le-Ultra-Thin?
Itshe elincane elingu-Ultra lilula kakhulu ngesisindo futhi alidingi inqubo eyomile eyengeziwe yokulenga elenge njengetshe lendabuko. Inqubo ejwayelekile yokulenga izokwazi ukuhlangabezana nezidingo.
▲Ishadi Lokugeleza Kwenqubo Yokulenga Eyomile, Umthombo Wezithombe: TOP
Itshe elincane kakhulu lilula kakhulu uma lifudunyezwa umoya ofudumele futhi lingaphathwa kalula kuzo zombili izindawo ezisicaba nezigobile. Kulula futhi ukusika ngomsiki omncane.
Mane nje unamathisele udonga, ulusule ngokulinganayo bese ulumanzisa ulaminethe, futhi luyoba namandla kakhulu.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi imivimbo evikelayo ezungeze itshe elilodwa elincane kakhulu ngokuvamile ibekwa kusengaphambili ukulungiselela amalunga phakathi kwamatshe amabili alandelayo angama-ultra-thin.
I-interface futhi yokuhlangana okuhleliwe, ukwakhiwa kwetshe elincane kakhulu kuzophothulwa, kube sengathi kunamathisela iphepha lodonga njengokulula futhi okulula.
Edlule :: Amamitha ayi-160 Esikwele eBeijing, Uhlala Wedwa, Lokho Kuphila Okuphezulu! Olandelayo: Amathiphu Wakho Okuthenga Ompompi Abalungile
2020 / 12 / 05 3275